धामीको ‘आश्रम’ मा १४ वर्षीय किशोरी मृ’त्यु : त्रिशूलले घो’चेर ह’त्या ![ भिडियो हेर्नुहोस् ] – Dainik Sangalo
धामीको ‘आश्रम’ मा १४ वर्षीय किशोरी मृ’त्यु : त्रिशूलले घो’चेर ह’त्या ![ भिडियो हेर्नुहोस् ]
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष २५, २०७८ समय: १३:२३:११
सिन्धुपाल्चोककी १४ वर्षीया किशोरी रोशनी श्रेष्ठमा टाउकोसम्बन्धी समस्या भएपछि उनको परिवार उपयुक्त उपचारको खोजीमा थियो । कैयन् पटक अस्पताल पनि लगियो, तर टाउको दुख्ने समस्या निको नभएपछि उनकी आमालाई कसैले सुनायो– काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका १ स्थित पानी ट्याङ्कीमा चर्चित धामी छन्, त्यहाँको ‘धामी आश्रम’मा लैजाऊ । छोरीको समस्या निको हुने ठानेर श्रेष्ठकी आमा गत पुस ३ गते त्यही धामीकहाँ पुगिन् । उनले छोरीको समस्याबारे धामी उमा शाही ठकुरीलाई बेलिबिस्तार लगाइन् ।
सबै समस्या सुनेपछि धामीले आफूले समस्या निको पार्नेमा आस्वस्त पार्दै छोरीलाई छाडेर जान भनिन् । धामीले निको पार्ने भनिसकेपछि सोहीअनुसार छोरी छाडेर फर्किइन् आमा । तर, बि डम्बना धामीकहाँ छाडेर गएको २१ दिनपछि अर्थात शनिबार उनै छोरीको कहिल्यै नफर्किने गरी संसारबाट बिदा भएकी छन् । रहस्य’मय ढंगले मृ’त्यु भएको रोशनीको धामीले त्रिशूलले घो”चेर गएराति ह”त्या गरेको आफन्तले दा’वी गरेका छन् । मृ”तकका आफन्तका अनुसार टाउको दुख्नेबाहेक मृ तकका खासै समस्या थिएन ।
१४ वर्ष भएपनि १८ वर्षको जस्तै हट्टाकट्टा देखिन्थिन् रोशनी । ‘सामान्य कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने समस्या थियो । आमाले धामीबारे थाहा पाएपछि त्यहाँ लगेर पुस ३ गते छाड्नुभएको रहेछ’, ती आफन्तले भने, ‘धामीले ट्रस हालेर बसोबास गरेको रहेछ । पी’डितका एक आफन्तले धामीले कु’टपिट गरेर रोशनीको ह”त्या गरेको दा’वी गरे । मृ’तकको शरीरका विभिन्न भागमा नि’लडाम देखिएको छ भने नाकबाट र’गत बगेको र र’गत जमेको अवस्थामा देखिएको छ ।
त्यहाँ पुर्याउँदाखेरी तपाईँको बच्चालाई सबै ठीक पार्छु, मेरो जिम्मा छाडिदिनु भनेपछि छाडिएको हो ।’ नाकबाट आएको रगत जमेर जाम भएको थियो । जिउभरी नि लडाम र त्रिशूलले घो’चेको देखिने डामहरु थियो’, आफन्तहरुले दा वी गरेका छन् । मृ तकको श व अहिले पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ । मृतक रोशनी कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिइन् भने उनका बाबु रणबहादुर विगत ७ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मलेसियामा छन् ।
छोरी निको हुने आशमा धामीको जिम्मा लगाएको श्रेष्ठ परिवारलाई छोरीको अ प्रत्याशित मृ त्युले बज्रपात भएको छ । पी’डित परिवारको उजुरीपछि प्रहरीले धामी ठकुरीलाई प’क्राउ गरेको छ । महानगरीय प्र’हरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता दीनेशराज मैनालीले पनि घ’टनापछि प्र’हरीले धामी ठकुरीलाई प’क्राउ गरेको बताए । हिरासतमा पनि धामीले काप्नेदेखि अनेक जादुकला देखाउने गरेको पी डितहरुले बताएका छन् ।
पी डितले शनिबार नै धामीलाई हि रासतमा राखिएको महानगरीय प्र’हरी वृत्तमा पुगेर कडाभन्दा कडा का रबाहीको माग गरेका छन् । स्वयम्भुका डीएसपी मिलन केसीले पी’डकलाई प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरिने विश्वास दिलाएका छन् । मृ’तकको शव पो”स्टमा”र्टमका लागि पठाइएको भन्दै उनले यसबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए ।राजधानीमा धामीको उपचार केन्द्रमा यौन हिंसादेखि यातनासम्मका घ टनाहरु बेलाबेलामा बाहिरिने गरेका छन् । धामीझाँक्री उपचार पद्धति अन्धविश्वास भएपनि कतिपयले यसमै विश्वास गर्दा बेलाबेलामा यस्तै दु र्घटनाहरु बाहिरिने गरेका छन् ।
Last Updated on: January 9th, 2022 at 1:23 pm